★မြန်မာ့အလင်း★: My Journey to Freedom
9/11 ကိစ္စရှင်းပါရစေ။ 9/11 ဖြစ်စမှာ အမေရိကန်တွေ သေကျေလို့ဆိုပြီး သူတို့က အင်မတန်ကို ၀မ်းသာခဲ့ပါတယ်။ သူများသေတာကိုမြင်ရင် ၀မ်းသာတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ဘယ်အဆင့်မှာရှိလဲ ပြောဖို့မလိုပါဘူး။ 9/11 ကို အမေရိကန် အစိုးရ နောက်ကွယ်က ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဗီဒီယိုတွေ ဆောင်းပါးတွေ အများကြီး အင်တာနက်မှ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်မွတ်ဆလင်တွေက ဘင်လာဒင်အကြမ်းဖက်လို့ သေသွားတဲ့ အမေရိကန်တွေကို သနားသလိုလိုနဲ့ ဘင်လာဒင်ကို တဖက်လှည့် ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ ဘင်လာဒင်က သတ်တယ်လို့ လူတိုင်းကို လိုက်ကြွားပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်အစိုးရက မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်ဖြတ်တာ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါတယ်။ ပလီတွေကိုလဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လူတွေကလဲ မွတ်ဆလင်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်လာပါတယ် (မြန်မာတွေကတော့ ကုလားဖင်ရက်နေဆဲပါ) အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကုလားတွေက သူတို့အတွက် 9/11 ဘင်လာဒင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ ပြောဆိုချင်းက အကျိုးမရှိဘူးလို့မြင်လာပါတယ်။ ဒီတော့မွတ်ဆလင်တွေက ဗျူဟာပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဗျူဟာအသစ်ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင် 9/11 ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယုတ်ညံ့၊ ကောက်ကျစ်၊လိမ်ညာ၊ လူသတ်၊ မိုဒိမ်းကျင့် စတဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ရှင်သန်နေရတာမွတ်ဆလင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်ရှိတဲ့သူတိုင်း မွတ်ဆလင်ဘာသာကနေ ထွက်သင့်ပါပြီ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:57 PM
Welcome to freedom. Freedom of spirit, freedom of mind, freedom from bondage. Cherish life and appreciate it's gift. You deserveabig hug.